Lego Star Wars 75309 Republic Gunship ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - Brick Fanatics
15 / 07 / 2021 08 / 02 / 2022 Chris Wharfe 2746 Views စာ 1 မှတ်ချက် 7163 သမ္မတနိုင်ငံ Gunship, 75021 သမ္မတနိုင်ငံ Gunship, 75252 မှာ Imperial စတား Destroyer, 75275 A- တောင်ပံ Starfighter, ၇၅၃၀၈ R75308-D2, 75309 သမ္မတနိုင်ငံ Gunship, 7676 သမ္မတနိုင်ငံတိုက်ခိုက်ရေး Gunship, အဆိုပါ Clone ၏တိုက်ခိုက်, Clone Trooper တပ်မှူး, တပ်မှူး Cody, Hans Burkhard Schlömer, Ideas, Jedi နဲ့ Bob, Lego, Lego Ideas, Lego Ideas မဲပေးပှဲ, lego ပြန်လည်သုံးသပ်, Lego Star Wars, Lego Technic, တင်းပုတ် Windu, prequel trilogy ပာ, အဆိုပါ Sith ၏လက်စားချေ, reviews, Star Wars, Star Wars: Clone ၏တိုက်ခိုက်မှု, Star Wars: အ Sith ၏လက်စားချေ, Star Wars: အဆိုပါ Clone စစ်ပွဲများ, Star Warsဖြေ။ ။ Phantom အန္တရာယ်, နည်းပညာ, အဆိုပါ Clone Wars, အဆိုပါ LEGO Group, The Phantom အန္တရာယ်, SCU, Ultimate စုဆောင်းစီးရီး ဖတ်ပြီးသားမိ 16
အချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသော 75309 သမ္မတနိုင်ငံ Gunship နောက်ဆုံးတော့ဒီမှာ - ဒါပေမယ့်ပထမ ဦး ဆုံးပါဘူး Lego Star Wars ၂၀၁၀ ခုနှစ်ကတည်းကကြိုတင် trilogy ခေါ်မော်တော်ယာဉ်ကို အခြေခံ၍ UCS အစုံသည်ကျွန်ုပ်တို့တောင်းသမျှကိုဖြည့်ဆည်းပေးသလား။
ပရိသတ် ၃၀,၀၀၀ ကျော်တို့သည်သေချာစေရန်တာဝန်ရှိသည် 75309 သမ္မတနိုင်ငံ Gunship တစ် ဦး အတွက်အထင်ကရတပ်များသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက် droves အတွက်မဲပေးပြီးလျှင်, 2021 ခုနှစ်တွင်စင်ပေါ်အပေါ်ဆင်းသက်လိမ့်မယ် Lego Ideas ပြီးခဲ့သည့်ဖေဖော်ဝါရီလစစ်တမ်း။
အလားအလာရှိသော UCS TIE ဗုံးကြဲလေယာဉ်နှင့် UCS Nebulon-B ဖရီးဂိတ်စစ်သင်္ဘော စောင့်ဆိုင်းရ ဦး မည်။ ဤအချိန်သည်ဂျုးလူးကပ်စ် CGI မှစွန့်စားခန်းများကြောင့်ကြီးပြင်းလာပြီးယခုကြီးမားသောအရာများကိုဖြုတ်ချရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေသော prequel trilogy ပာကလေးများအချိန်ဖြစ်သည်။ လူကြီးများအတွက် Lego-sized ဘတ်ဂျက်အပေါ် Lego Star Wars အစုံ။
75309 သမ္မတနိုင်ငံ Gunship ပထမ ဦး ဆုံးအခွင့်အလမ်းဆိုတာငါတို့လုပ်ခဲ့ကြတာပါ၊ ဒါကြောင့်ပရိတ်သတ် ၃၀၀၀၀ ရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကသူ့ပခုံးပေါ်ကိုရောက်သွားပြီး ဖောင်းပွနှင့်ကန် - start Phantom Menace, Clone of Attack နှင့် of Revenge အပေါ် အခြေခံ၍ Ultimate Collector Series အသစ်၏လှိုင်းအသစ် သံSာ?
theme: Star Wars အမည်သတ်မှတ်မည် - 75309 သမ္မတနိုင်ငံ Gunship ဖြန့်ချိ: သြဂုတ်လ 1, 2021
စျေးနှုန်း: £ 329.99 / $ 349.99 / € 349.99 အပိုင်းပိုင်း: 3,292 အသေးစားပုံများ: 2
ဖြစ်ကောင်းဆိုဆိုသဘောပေါက်အတွက်အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှု Lego Star Wars UCS စကေးဖြင့်ပေါင် ၁၀၀ + အခကြေးငွေပုံမှန်ပေးရသည့်သင်္ဘောသည်ဘတ်ဂျက်ကိုလုံးလုံးလျားလျားမှုတ်ထုတ်ခြင်းမရှိဘဲထိုအတိုင်းအတာကိုတွက်ချက်နိုင်သည်။ ဤသင်္ဘော၏နောက်ဆုံး playset ဗားရှင်းကိုပေါင် ၁၀၉.၉၉ / ဒေါ်လာ ၁၁၉.၉၉ ဖြင့်ရရှိသည်။ ၎င်းသည်အလွယ်တကူဖြစ်ပျက်နိုင်သည် 75309 သမ္မတနိုင်ငံ Gunship၎င်းကိုအမှန်တကယ်နှင့်အမှန်တကယ်တပ်ဆင်ရန်ကြိုးပမ်းမှုတွင်art ယင်း၏ minifigure - စကေးအရင်ကနေ။
ဒါပေမယ့်ဒီဇိုင်နာ Hans Burkhard Schlömerကိုသူဂုဏ်ယူပါတယ်၊ သူဟာစျေးနှုန်းကို Ballooning အထိထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခဲ့တယ် 75192 ထောင်စုနှစ် Falcon နှင့် 75252 မှာ Imperial စတား Destroyer နေဆဲယခင်သမ္မတဟောင်း Gunships ၏စကေးအထက်နှင့်ကျော်လွန်ပြီးသွားတဲ့သင်္ဘောပို့ဆောင်နေစဉ်, အဆင့်ဆင့်, အဲဒီလိုလုပ်ခြင်းအား၌, ထို Ultimate Collector စီးရီးတံဆိပ်၏အလွန်ထိုက်တန်ခံစားရပါတယ်။
သို့သော်ထိုပမာဏအတိုင်းအတာကိုသေတ္တာတစ်ခုတည်းမှသိရန်ခဲယဉ်းသည်။ အသံတိတ် 18+ ထုပ်ပိုးခြင်းသည် ထပ်မံ၍ တစ်ခု၏အရောင်းရဆုံးဖြစ်သည်။ Lego အုပ်စု၏စျေးအကြီးဆုံးပစ္စည်းများနှင့်အဓိကပုံရိပ်၏အဆင်မပြေသောထောင့်သည်တကယ်မကူညီပါ။ ၏သက်သက်အရွယ်အစားမှမျှော်လင့်ထားရာ၏ပိုကောင်းတဲ့စိတ်ကူးသည် 75309 သမ္မတနိုင်ငံ Gunshipဤပြန်လည်သုံးသပ်မှုရှိဓါတ်ပုံများ (နှင့်တရားဝင်လူနေမှုပုံစံစသည့်ပုံများပင်) ကိုကြည့်ပါ။
Part ဒီစကေးကိုလှည့်စားနိုင်တဲ့အရာကဒီ Gunship ဟာ minifigure - scale ဗားရှင်းတွေနဲ့တူတဲ့သူ့ရဲ့ရှေ့ဆုံလည်များအတွက်တူညီတဲ့ဘောလုံး - အပိုပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုသည်။ Hans တစ် ဦး အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောသည်အဖြစ် မကြာသေးမီကစားပွဲဝိုင်းအင်တာဗျူး, ထိုတူညီသောဒြပ်စင်များအတွက်ဖြေရှင်းဘို့အလွန်တိကျတဲ့အကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်, သူတို့ကစကေးဆက်သွယ်ဖို့ကွေးအုတ်တွေနဲ့တန်ဆာဆင်။
Gunship's box ထဲ၌သင်မျက်လုံးကိုဆွဲယူလိုက်သောပထမ ဦး ဆုံးအရာတစ်ခုဖြစ်သည် art, ဒီ set ကို၏အရွယ်အစားလျှော့တွက်ဘို့သင့်ကိုစစ်ကြောစီရင်တော်မူမည်။ သင်ကိုယ်တိုင်ဘာတွေ ၀ င်နေတယ်ဆိုတာသိအောင်လုပ်ပါ၊ (သင်ပိုကြီးတဲ့လိုအပ်တာပေါ့ လှေ စင်။)
လန်းလန်းဆန်း Lego Star Wars UCS အစုံ, တည်ဆောက်မှု၏အစောပိုင်းအဆင့်ဆင့်အံ့သြစရာရှိပါတယ် နည်းပညာ-lite ။ အပါအဝင်လတ်တလောမော်ဒယ်များ 75252 မှာ Imperial စတား Destroyer နှင့် 75275 A- တောင်ပံ Starfighter တစ် ဦး core ကိုအပေါ်အကြီးအကျယ်မှီခိုပါပြီ နည်းပညာ သူတို့ရဲ့အပြင်ဘက်ခွံ၏အလေးချိန်နှင့်တည်ငြိမ်မှုကိုထောကျပံ့ဖို့ဘောင်, ဒါပေမယ့် 75309 သမ္မတနိုင်ငံ Gunship အစားအစဉ်အလာပြားနှင့်အုတ်၏ (နှင့်ကြိုဆို) ရောနှောအပေါ်ကျရောက်ပါတယ်။
ဒါကလုံးဝမရှိဟုမဆိုလိုပါ နည်းပညာနှင့်တကယ်တော့အမှန်တကယ်အနည်းငယ်မျှသာသည် Gunship ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာသမာဓိကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်အတွက် ပို၍ ပင်ကြီးမားသောအခန်းကဏ္ has မှပါဝင်သည်။ တပ်များသည်လုံးဝဆွန်းဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်္ဘော၏တောင်ပံကျယ်ပြန့်မှုကိုထောက်ပံ့ရန်အတွက်၎င်း၏ထိပ်တစ်လျှောက်တွင်ရှိသောဘားသည်ပကတိလေးလံသောရုတ်သိမ်းမှုများစွာပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
အတော်လေးရီစရာပါပဲ နည်းပညာ segment သည်အမှန်တကယ်အားဖြင့်အားအနည်းဆုံး p ဖြစ်သည်art ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်၏။ အဓိကဘားနေရာကိုရောက်ပြီဆိုလျှင်သင်တပ်ဆင်ထားသောအင်ဂျင်၏နောက်ဘက်ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုဆက်လက်တည်ဆောက်ရန်နူးညံ့သော (သို့သော်တစ်ချိန်တည်းတွင်ခိုင်မာသည့်) ထိတွေ့မှုလိုအပ်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်တစ်ခုလုံးအပေါ်အမှန်တကယ်ခက်ခဲသောတည်ဆောက်မှုတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည် ၁၈+ tag ၏ (၎င်းအတွင်း၌ပင်) အလွန်ထိုက်တန်သည့်အခက်အခဲတစ်ခုဖြစ်သည် Lego Group သည်အခက်အခဲကိုမဖော်ပြနိုင်ခြင်းသည်ပြတ်သားသည်။
အမျိုးမျိုးသောပုဒ်မခွဲပေါင်းစုံကိုထည့်သွင်းခြင်းတွင်လှည့်စားရသောထောင့်အချို့ရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်တောင်ပံ၏အောက်ပိုင်းသည်စိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။artအဆိုပါ Gunship အများစုကိုပေးသော icularly ခက်ခဲသောအပိုင်းကြောင်းအချက်အားဖြင့်အရပျပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ အများအားဖြင့်တော့ထပြီးလမ်းတစ်လျှောက်ပတ်လမ်းလျှောက်ဖို့မလိုတော့ပေမယ့်သင်ဒီမှာလုပ်နေတာတွေ့ရလိမ့်မယ်။ (ခြေထောက်ပေါ်ရှိလှေခင်းများသည်သင်အာကာသကိုသတိပြုမိလျှင်လှည့်ရန်လွယ်ကူစေသည်။ သို့သော်သင်သိသည်ဆိုလျှင်ယင်းသည်ထိုသို့ဖြစ်ခဲ့လျှင်၎င်းကိုမဝယ်သင့်ပေ။ )
တပ်ဆင်အတွက်ပါဝင်ပတ်သက်အဆိုပါအခက်အခဲ 75309 သမ္မတနိုင်ငံ Gunship အင်ဂျင်နီယာနည်းပညာ၏အောင်မြင်မှုကိုထင်ဟပ်ပြခြင်းမှာနှိုင်းယှဉ်မှုအနည်းငယ်သာရှိသည် နည်းပညာ ၎င်း၏ ၃,၂၉၂ အပိုင်းကို ဖြတ်၍ ၎င်း၏အလေးချိန်အများစုကိုလက်တဆုပ်စာမျှလောက်မျှဖြင့်ထုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည် UCS set အတွက်လန်းဆန်းစေသောနည်းလမ်းဖြစ်ပြီး ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ၁၀၂၁၅ Obi-Wan မှ Jedi Starfighter မှစတင်၍ ၎င်း subtheme ရှိပထမဆုံး prequel trilogy ကိုမော်တော်ယာဉ်တွင်အသုံးပြုခဲ့သည်။
သို့သော် UCS မော်ဒယ်တစ် ဦး သည်အရွယ်အစားနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှုဆိုင်ရာသမာဓိရှိမှုအပေါ်လုံးလုံးမှီခိုအား ထား၍ မရနိုင်ပါ။ ၎င်းသည်၎င်း၏အရင်းအမြစ်၏ပုံသဏ္andာန်နှင့်အသေးစိတ်များကိုလည်းဖော်ပြရန်လိုအပ်သည်။ 75309 သမ္မတနိုင်ငံ Gunship ဒါကိုလည်းစိတ်ထဲစွဲမှတ်ထားရင်းနဲ့မလုပ်ပါဘူး Lego တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် artistic အလတ်စား, ဤထို့ကြောင့်ယင်း၏ဘာသာရပ်ကိစ္စတစ် ဦး ပကတိစကေးမော်ဒယ်ထက်အနက်ဖြစ်ပါတယ်) ။
ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်၎င်းသည်တည်ဆောက်မှုအတွေ့အကြုံသာမကသာမကအချောသတ်ပုံစံကိုလည်းပါနက်ရှိုင်းစေသည့်အသိဥာဏ်နှင့်ဆန်းသစ်သောနည်းစနစ်များဖြင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ အဆင့်ဆင့်ကွေးသောဒြပ်စင်များသည်အစစ်အမှန်သဘောတူညီချက် (သို့မဟုတ်စိတ်ကူးယဉ်သဘောတူညီမှု) ၏နှာခေါင်းတွင်တွေ့ရသောတိုးချဲ့ဆင်ခြေလျှောကိုဖော်ပြသည်။ သင်္ဘော၏ထိပ်ရှိခဲယမ်းမီးကျောက်များတွဲဖက်လည်ပတ်; နှင့်တိုးချဲ့ပူဖောင်းဆုံလည်၌သေနတ်ထိုင်ခုံသူတို့ပထမ ဦး ဆုံးအတူတကွလာပုံကိုနှင့်သင်နောက်ပိုင်းတွင်အနေအထားသို့လှည့်ပုံကိုသင်အံ့အားသင့်လိမ့်မည်။
သူတို့အားပူဖောင်းဆုံလည်အကြောင်းပြောခြင်း - ၎င်းတို့သည်အကြီးဆုံးဒီဇိုင်းရွေးချယ်မှုဖြစ်နိုင်သည် 75309 သမ္မတနိုင်ငံ Gunship၎င်းသည်၎င်းသည်စကြဝshipာအတွင်းရှိ p ၏ p ဗားရှင်းကို အခြေခံ၍ ပြောခြင်းဖြစ်သည်artial- ပိတ်ပင်လယ်အော်တံခါးများ။ 7163 Republic Gunship နှင့် 75021 Republic Gunship နှုန်းအရရှေ့တံခါးများကို Swing turret များဖြင့်အစားထိုးထားသည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်၏ Clone Wars TV စီးရီးများပေါ်တွင်အခြေခံသည့်တစ်ခုတည်းသော 2008 ခုနှစ် 7676 Republic Attack Gunship နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။
ကြည့်လို့ကောင်းတယ်art အပြည့်အဝ - ပိတ်တံခါးများသည်ကြည့်ရှုရန် ပို၍ စိတ်ကျေနပ်စရာကောင်းသော်လည်း၊ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည့် bubble turrets များ - ဤနေရာတွင် windscreen ဒြပ်စင်များကဲ့သို့ပင် ပိုမို၍ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးအမျိုးမျိုးသောတည်ဆောက်မှုအတွေ့အကြုံကိုရရှိစေသည်။ တစ်ခုတည်းသောအားနည်းချက်မှာသင်္ဘော၏အမြီးရိုးတန်း၏အတွင်းပိုင်းရှိရှင်းလင်းသောဆန့်ကျင်တုံးများကိုဖော်ထုတ်။ ၎င်းသည်အချို့သောထောင့်များမှကြည့်ရှုသောအခါအမှန်တကယ်နာကျင်သည့်နေရာဖြစ်သည်။
ထိုအမြီးသန္တာကျောက်သည်မြေထုဆွဲအားအားမအောင်နိုင်သေးသောတစ်ခုတည်းသောနေရာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လုံလောက်သောနေရာတွင်ကလစ်ပ်များရှိနေသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြန်လည်သုံးသပ်သည့်မိတ္တူရှိထိုကလစ်များ၏အရည်အသွေးသည်ပုံမှန်ထက်ပိုမိုဆိုးရွားလာသဖြင့်သို့မဟုတ်ပြားများတပ်ဆင်ခြင်းသည်အလွန်လေးလံသောကြောင့်ဖြစ်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ချဉ်းကပ်လမ်းသည်အကြိမ်ကြိမ်လဲကျလေ့ရှိသည်။
နောက်ဆုံးအသေးအဖွဲကိစ္စတစ်ခုမှာ Gunship ထိပ်တွင်ထိုင်နေသောဒုံးကျည်ပြူတင်းပေါက်များပေါ်တွင်တည်ရှိသည်။ သူတို့ကနောက်ဆုံး p ပါပဲart အတူတူလာရန်သင်္ဘော၏အများဆုံး p များအတွက်art၎င်းတို့သည်၎င်းတို့ကိုယ်စားပြုသင့်သည့်အရာ၏ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောဖက်စပ် - အနည်းဆုံးရှိပြီးသား p အတွင်းတွင်ရှိသည်art ပန်းချီကား။ သူတို့ကအနည်းငယ်နည်းနည်းလေးလွန်းတယ်၊ အဆုံးမှာအနက်ရောင်အပိုင်းအစတွေဆီကိုကူးပြောင်းတာကအရမ်းပြင်းထန်လွန်းတယ်၊ ဒါပေမဲ့ဒီအတိုင်းအတာမှာသူတို့ရဲ့ပုံသဏ္achieveာန်အောင်မြင်ဖို့ပိုကောင်းတဲ့နည်းလမ်းကိုငါတို့မစဉ်းစားနိုင်ဘူး။
ပို၍ စိတ်ရှုပ်စရာကောင်းသည်မှာ၎င်းတို့ကို ဖြတ်၍ လိုအပ်သောစတစ်ကာများဖြစ်သည်။ နှင့်သုံးခုကလွယ်ကူချောမွေ့သောနောက်ဘက်ကိုယ်ထည်, သူတို့ကိုချိတ်ဆက်ရန်လိုအပ်သောအင်အား နည်းပညာ တစ် ဦး ချင်းစီအခြမ်းအပေါ်တံသင်။ သူတို့ကိုအငြင်းပွားစရာများသို့မဟုတ်သင်္ဘောဖြစ်စေမချိုးဘဲသူတို့ကိုအရပျကိုရယူခြင်းသည်သင့်အားအမှန်တကယ်အောင်မြင်မှုရရှိစေသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်သင့်ကိုအနည်းငယ်ကြိုးစားကြည့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
သူများသည်အမှန်တကယ်အလွန်သေးငယ်သောဆုပ်ကိုင်ထားကြသည်, သို့သော်မဟုတ်ရင်တစ် ဦး အလွန်ကျေနပ်စရာကောင်း, အစစ်အမှန်နှင့်တိကျမှန်ကန်သောပြန်ဆိုသမ္မတနိုင်ငံ Gunship အတွက် Lego အုတ် - အသစ်တစ်ခုကိုပုံသွင်းသောဒြပ်စင်မရှိဘဲ။
လွန်ခဲ့သော ၁၇ လကအဆင့် ၂ တပ်မှူး Cody နှင့် / သို့မဟုတ် Jedi Bob အားမဆုတ်မနစ်တောင်းဆိုခဲ့သည့်ပရိသတ်များအတွက် Mace Windu နှင့် Clone Trooper Commander တို့ထိုင်နေကြသည် 75309 သမ္မတနိုင်ငံ Gunship's ရပ်တည်ချက်တော်တော်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်လိမ့်မည်။
ဒါပေမယ့်မဖြစ်သင့်ဘူး - ဒီဟာကမင်းတို့ဟာအသေးစားဓာတ်ပုံတွေအတွက် ၀ ယ်နေတဲ့အရာမဟုတ်ဘူး၊ ပြီးတော့လူကြိုက်များတဲ့အက္ခရာတွေကိုပေါင် ၃၂၉ ရဲ့နောက်ကွယ်မှာတပ်ထားတဲ့အတွက်သော့ခတ်တာကမှားယွင်းနေတာပဲ။ အဲဒီအစား Star Wars ဒီဇိုင်းအဖွဲ့သည်အလွန် sm ရှိပါတယ်artငါတို့ (Gunship သည်သင်၏ဆန္ဒစာရင်းတွင်အမြင့်ဆုံးမဟုတ်လျှင်) ကျွန်ုပ်တို့အများစုမပါ ၀ င်နိုင်သည့်အသေးစားပုံစံနှစ်ခုပါ ၀ င်သော်လည်း၎င်းတို့သည်သူတို့ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးအတွက်များစွာကောင်းသည်။
သူကပြောပါတယ်, Jedi Bob မှပြီးပြည့်စုံသော meta ထို့အပြင်ဖြစ်လိမ့်မည် 75309 သမ္မတနိုင်ငံ Gunship အတိအကျ သောကြောင့်, ဘယ်သူမှဒီအသေးစားဓာတ်ပုံတွေအတွက်သီးသန့်ဝယ်တာမဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့် Hardcore ပန်ကာ ၀ န်ဆောင်မှုကအရောင်းအဝယ်လုပ်တဲ့ ၀ ယ်သူတွေကို Jedi လို့နာမည်ပေးချင်တဲ့သူကိုချန်မထားဘူး။ la vie C'est ။
အရင် Ultimate Collector Series အစုံနှစ်ခု၏တန်ဖိုးကိုခဏစဉ်းစားကြည့်ရအောင်။ 75275 A- တောင်ပံ Starfighter နှင့် 75252 မှာ Imperial စတား Destroyer စိတ်မကောင်းပါဘူး ၇၅၃၀၈ R75308-D2- သင် UCS မဟုတ်ဘူး၊ Lego အုပ်စု) ။ ယခင်သည် 179.99 အပိုင်းအစများအတွက်ပေါင် ၁၇၉.၉၉ / ဒေါ်လာ ၁၉၉.၉၉ / ယူရို ၁၉၉.၉၉ ဖြင့်ရောင်းချသည်။ အနိမ့်ဆုံးအနေဖြင့် ၄,၇၈၄ ကွက်အတွက်£ 199.99 / $ 199.99 / ယူရို ၆၉၉.၉၉ ဖြင့်ရောင်းချသည်။
ဒါကမျှော်လင့်ပါတယ်။ စျေးနှုန်း per-piece တစ်ခုရဲ့မက်ထရစ်ဟောင်းကသိပ်ပြီးအရေးမကြီးတော့ဘူးဆိုတာပြသရန်ဖြစ်သည်။ Star Destroyer တွင် A-wing နှင့်ယခင် UCS တို့နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်၎င်း၏စျေးနှုန်းသိသိသာသာမြင့်တက်လာသည့်ကြီးမားသောဒြပ်စင်များပါဝင်သည်။ အစုံ။ ဒီတော့နေ 75309 သမ္မတနိုင်ငံ Gunship စက္ကူပေါ်တွင်ပေါင် ၃၂၉.၉၉ / ဒေါ်လာ ၃၄၉.၉၉ / ယူရို ၃၄၉.၉၉ ဖြင့် ၃.၂၉၂ စက္ကူဖြင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာခံစားရသည်။
မေးခွန်းဖြစ်ပါသည်: ကပါဘူး ခံစား အားလုံးပြောပြီးပြုသည့်အခါကောင်းသောတန်ဖိုးကိုလိုလား? ထိုမေးခွန်းကိုမေးသောအခါစဉ်းစားရန် ပို၍ သက်ဆိုင်သောအချက်မှာစုစုပေါင်း ၇၄ စင်တီမီတာရှိသည်။ ၎င်းသည်နေရာထိုင်ခင်းမည်မျှလိုအပ်သည်ကိုမှတ်သားရန်အလွန်ကောင်းသည် 75309 သမ္မတနိုင်ငံ Gunshipထို့ကြောင့်ထို့ကြောင့်သင်၏အသေးစားဓာတ်ပုံအသေးစားများကိုရပ်တည်မှုတွင်နေရာချသည့်အချိန် (ညွှန်ကြားချက်လက်စွဲတွင်နောက်ဆုံးထိ) သင့်ငွေဘယ်လောက်အထိကုန်သွားသည်ကို ပို၍ ညွှန်ပြသည်။
နှာခေါင်းနှင့်လေယာဉ်ကိုယ်ထည်အတူတကွလာသည်နှင့်အမျှသင်ယင်းကိုသဘောပေါက်နားလည်လိမ့်မည်မဟုတ်သော်လည်းထိုအတောင်ပံများ၏ပထမ ဦး ဆုံးအရာကိုအစားထိုးလိုက်သောအခါ၊ 75309 သမ္မတနိုင်ငံ Gunship ချက်ချင်းအရည်ပျော်လိမ့်မည်။ စဉ်ဆက်မပြတ်မူရင်းသုံးထီပိုလီယိုမော်တော်ယာဉ်များ၏မျက်နှာတွင် UCS ပြင်ဆင်မှုကိုအားကိုးနေခဲ့သည့် prequel trilogy ပရိတ်သတ်များသည်ဤတစ်ခုအတွက်စျေးအပြည့်အ ၀ ရခြင်းအတွက်နောင်တမရပါ။
75309 သမ္မတနိုင်ငံ Gunship မကြာသေးမီကမှတ်ဉာဏ်ထဲထည့်ထားသောအခြား UCS နှင့်အလွန်ကွာခြားသည် - ၎င်းသည်အသိုင်းအဝိုင်းမှဆုံးဖြတ်ခဲ့သည့်ပထမဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ် trilogy ပာဥပမာဖြစ်သည်။ နှင့်အခြားမည်သည့်မှတစ် ဦး အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောအဆောက်အ ဦး အတွေ့အကြုံကိုပေးထားပါတယ် Lego Star Wars တိုက်ရိုက် - စားသုံးသူစင်ပေါ်မှာလက်ရှိထားကြ၏။
အဲဒါတွေအားလုံးကြောင့်ပါပဲ 75309 သမ္မတနိုင်ငံ Gunship လက်ရှိနဂါးငွေ့တန်းမှဝေးလံခေါင်သီသောနေရာတွင်တည်ရှိနေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အသေးအဖွဲအမြင်အာရုံချို့ယွင်းမှုများနှင့် Jedi Bob မရှိခြင်းတို့ကြောင့်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သည် - prequel trilogyy ယာဉ်များကိုပရိတ်သတ်များ (နှင့်ငါတို့ထွက်ခွာကြသည် - အနည်းဆုံး ၃၀,၀၀၀ ၏) ကျွန်တော်တို့ကို!) ပွဲတစ်ပွဲအများဆုံးမျှော်လင့်တ ဦး တည်းအဘယျသို့ကျေနပ်မှုထက်ပိုဖြစ်သင့်သည် Lego Star Wars အချိန်တိုင်းအစုံ။
သောအလုပ်ကိုထောကျပံ့ Brick Fanatics သင့်ရဲ့ဝယ်ယူခြင်းဖြင့်ပါဘူး Lego Star Wars ငါတို့သုံးပြီးစုံ တွဲဖက်လင့်ခ်များ.
LEGO တည်ဆောက်ရန်ဘယ်လောက်ကြာမလဲ Star Wars 75309 သမ္မတနိုင်ငံ Gunship?
သင်အကြမ်းအားဖြင့်ဘရွတ်ကလင် Nine-ကိုးရာသီ၏ ၆ ရာသီလုံးလုံးစုစုပေါင်းခြောက်နာရီခွဲမှ ၇ နာရီခန့်အတူတကွစုဆောင်းပြီးပါလိမ့်မည် 75309 သမ္မတနိုင်ငံ Gunship.
Lego ထဲမှာဘယ်လောက်အပိုင်းအစတွေရှိလဲ Star Wars 75309 သမ္မတနိုင်ငံ Gunship?
75309 သမ္မတနိုင်ငံ Gunship 3,292 p ပါရှိသည်artရေတွက်အိတ် 17 အစုံကိုဖြတ်ပြီး s ။ ဒါက ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ 2,117 Republic Gunship, ဒီမော်တော်ယာဉ်၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းထက်ပိုများသည် 2013 ပို။ ပိုသည်။
Lego ဘယ်လောက်ကြီးလဲ Star Wars 75309 သမ္မတနိုင်ငံ Gunship?
75309 သမ္မတနိုင်ငံ Gunship အလျား ၃၃ စင်တီမီတာ၊ အကျယ် ၇၄ စင်တီမီတာ (အတောင်ပံရှည်) နှင့် ၆၈ စင်တီမီတာရှိသည်။ ၎င်းသည်သားရဲတကောင်ဖြစ်ပြီး၎င်းကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်ရန်သင်များပြားလှသော display space လိုအပ်လိမ့်မည်။
Lego ဘယ်လောက်ကျပါသလဲ Star Wars 75309 သမ္မတနိုင်ငံ Gunship ကုန်ကျစရိတ်?
75309 သမ္မတနိုင်ငံ Gunship ယူကေတွင်ပေါင် ၃၂၉.၉၉၊ ယူအက်စ်ဒေါ်လာ ၃၄၉.၉၉ နှင့်ဥရောပတွင်ယူရို ၃၄၉.၉၉ မှရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီးသြဂုတ်လ ၁ ရက်တွင်စတင်မည်။
← နောက်ထပ်အာကာသ - ရေးရာ LEGO Ideas စီမံကိန်းပြန်လည်သုံးသပ်အဆင့်သို့ပစ်လွှတ်
၇၅၃၀၉ Republic Gunship တွင်မည်သည့်အသေးစားပုံများထည့်သွင်းရန် LEGO ကမည်သို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် →
တစ်ခုမှာ "Lego Star Wars 75309 Republic Gunship review - ပရိသတ် ၃၀,၀၀၀ ၏မျှော်လင့်ချက်ကိုရယူခြင်း"
04/11/2021 at 02:29
ဒီတည်ဆောက်မှုလေးပြီးသွားတော့ နောက်ဆုံးမှာ သဘောကျမိပေမယ့် စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့ စည်းဝေးပွဲတွေမှာ စုံတွဲပြဿနာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ အကန့်များသည် အနည်းငယ်သော ဖိအားအောက်တွင် ကျိုးသွားလောက်အောင် ပျော့ပျောင်းနေသောကြောင့် အတောင်ပံများပေါ်တွင် နောက်ဆုံးအပိုင်းများကို တင်ထားရခြင်းမှာ လုံးဝကို ဒေါသထွက်နေပါသည်။ အဆုံးတွင် ဦးထုပ်များ လုံးဝ မတည်ထားသောကြောင့် ရှေ့ခံတံနှင့် ပတ်သက်သော အခြားပြဿနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဆုံးမှာ ပြုတ်ကျတာကို တားဆီးဖို့ superglue ကို သုံးခဲ့ရတယ်၊ ဒါက ဆောက်မှုမှာ တစ်ခါမှ မသုံးဖူးတဲ့ အရာပါ။
တကယ်က၊ အဲဒါက အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ တည်ဆောက်မှုတစ်ခုဘဲ၊ မဝယ်ခင် ဒီသုံးသပ်ချက်ကို မြင်ချင်ပေမယ့်။ ဒီပစ္စည်းရဲ့ အရွယ်အစားကို လျှော့တွက်တဲ့ သူတွေထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ပြီးသွားပြီဆိုရင် ဘယ်မှာ သိမ်းထားရမယ်ဆိုတာ ရိုးသားစွာ မသိပါဘူး။